GoWikipedia - Masar
Isuduwe: 26°N 30°E﻿ / ﻿26°N 30°E﻿ / 26; 30
w:ar:Maṣar w:or:egypt Masar (Af-Carabi: مصر; Af-Ingiriis: Egypt) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyada Masar ee Carabta, جمهورية مصر العربية waa wadan ku yaalo Woqooyiga Afrika, wadankaan waxee leedahay buundo dhulka ah oo la dhoho Siinaa, waxeena isku xirta afrika iyo aasiya. Wadankaan waxoo xuduud la leeyahay wadamada Libiya, Suudaan, Falastiin iyo Israaiil, Dhinaca woqooyi neh waxaa kaga dhegan Bada dhexe, dhinaca bariga neh waxaa kaga dhegan Bada cas, Caasimada wadanka waa Qaahiro. Masar waxee ka midtahay wadamada ee ku noolyihiin dad aad u badan marka la fiiriyo wadamada afrika. Wadankaan waxaa degan dad gaaraayo ilaa 79,089,650 oo qof (dad tiriskii 2010), Dadka badankooda waxee degan yihiin magaalo yaasha waaweyn gaar ahaan meelaha oo wabiga Niil maro. dhinaca kale masar waxee leedahay dhul saxaaro oo aad u weyn, meelahaas neh dad badan ma degeno.Masaarida sxiibo fiican ayee la ahaan jireen madaxda somalida. Masar waxee ka midtahay wadamada aadka u duqsan, waxeena leedahay taariikh aad dheer.wadankaan waxaa markiisa hore xukumi jiray boqortooyo, waxaana lagu yaqaanaa ama ee caan ku tahay Mudulada sadax geeska ah oo lagu magacaabo afka ingriiska (Pyramids), waxeena ku yaalaan magaalada Gisa.Muduladaan sadax geeska ah waxaa la dhisay kumanaan sano kahor, waxaana dhisay adooman oo markaas boqortooyada masar lahaan jirtay. Masar waxee leedahay waxyaabo badan oo taariikhi ah oo lala yaabo. wadanka masar waxee ka midtahay wadamada gumeestaha yurubiyaanka ee qabsadeen.Masar waa qayb ka mid ah waqooyiga africa oo leh dalal dalxiis ah oo ka mid ah Algeria , Tunisia , Morocco
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Masar&oldid=186607"